बेहुलाबेहुलीमै कोरोना संक्रमण फेला परेपछि गाउँमा खैलाबैला, पुरै गाउँ त्रशित – Online Nepal
April 26, 2020 604
नयाँदिल्ली – नेपालमा भन्दा एक दिन ढिलो गरी भारतमा लागू लकडाउन जारी नै छ । यस्तो बेलामा यूपीको आजमगढका एक नवदम्पत्ति विवाहपछि राजस्थान पुगे । राजस्थानमा यी नवदम्पत्तिको स्वास्थ्य जाँच भयो, तब थाहा भए दुवै दम्पत्ति कोरोना संक्रमित पो रहेछन् ।
यसपछि राजस्थानकै अस्पतालमा यो दम्पत्तिको उपचार भइरहेको छ । तर, अजमगढमा जहाँ उनीहरुको विवाह भएको थियो, त्यहाँ खैलबैला मच्चिएको छ ।प्रहरीका अनुसार यो घटना आजमगढको छतरपुर ग्रामसभाको हो । स्थानीय प्रशासनले पूरै गाउँलाई शिल गरेको छ र सो क्षेत्रलाई स्यानिटाइज गरिएको छ।
आजमगढका सिटी एसपी पंकज पाण्डेलाई उद्धृत गर्दै समाचारमा भनिएअनुसार अप्रील १४ मा यो गाउँमा बेहुलाबेहुली पहिला गाजीपुर गएका थिए र त्यहाँबाट कारको माध्यमबाट राजस्थान पुगे । यही गरिएको टेस्टमा उनीहरु दुवैमा कोरोना पोजिटिभ देखियो ।दुलही छतरपुर गाउँकी बासिन्दा हुन् । प्रहरीले बेहुलीका सबै परिवारलाई क्वारेन्टाइनमा बस्न निर्देशन दिएको छ । – एजेन्सी
Prevजीरा पानीले २० दिनमै तपाईको तौल घटाउछ: जीरा पानी घरमै कसरी तयार गर्ने ? (शेयर गरौ)
Nextपरदेशमा २२ सय ३८ नेपाली कोरोनाबाट संक्रमित, ४८ को मृ’त्यु ,कुन देशमा कती?
हेर्नुहोस खुसिको खबर: विवाह गर्ने जोडिलाइ सरकारले ६ लाख दिने निर्णय !
भर्खर सार्वजनिक भयो १२ कक्षाका बिद्यार्थीका लागी नया खबर।
‘मुन्द्रेको कमेडी क्लब’ पुन संचालनमा आउने, दिपाश्री नदेखिने
होशियार ! धेरै वि*र्य खेर फाल्दा यस्तो हुन्छ.. जानी राखौ.. (61970)
डल्ले खुर्सानी यसरी प्रयोग गर्दा मोटोपना घटनुको साथै रगतमा सुगरको मात्रा पनि घटउँँछ
गर्भवती बनेपछि चर्चित गायिका नेहा कक्कर सार्बजनिक भए यस्ता तस्बिर